Borlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mmiri Ahia - Divenland
Esere mmiri bụ mmiri viscous nke resin, ma ọ bụ mmanụ, ma ọ bụ emulsion, na mgbakwunye nke mgbakwunye kwesịrị ekwesị, ma jiri ya ma ọ bụ mmiri kwadebere ya. Ezi arụmọrụ na-arụ ọrụ na mmiri na-enwekwa ihe ndị na-arụ ọrụ dị mma, ike na-ezobe ihe dị mma, nrapado ihe nkiri siri ike, njirimara njigide mmiri na àgwà ndị ọzọ. Cellulose ethers bụ ezigbo ngwa ọrụ iji nye ndị a.
Ngwongwo njigide mmiri nke cellulose ethers na-enye njiri mara mma maka akwa latex, karịsịa akwa mkpuchi PVC dị elu, na maka anụ ezi nri. Ọ dịghị ere; mmetụta ya dị elu nke na-eme ka ọ dị ala belata ego a na-eji, na-eme ka akụ na ụba nke usoro ahụ pụta ma na-eme ka arụmọrụ sistemụ mkpuchi dịkwuo mma. Nkwusioru. The magburu onwe rheological Njirimara na agba ịnọgide na-enwe kacha ndim nke agba na anyịnya ala; n’ọnọdụ ahụ a wụrụ awụ, ọ nwere ezigbo ọ flowụ andụ na enweghị ntụgharị; dị mfe ịgbasa na mkpụrụ n'oge brushing na mkpuchi mkpuchi, mfe itinye; n'ikpeazụ, mgbe etinyere agba ahụ, ọ dị mfe ịgbasa na mkpụrụ. A na-eweghachi viscosity nke usoro ahụ ozugbo ọ gwụchara, agba ahụ na-agbakwa ozugbo.
Mgbe ọgwụgwọ elu zuru oke, Maxcellulose ethers nwere ike igbochi agglomeration n'oge mgbasa, gbasasịa n'ụzọ zuru ezu, oge mgbasa zuru oke na ịrị elu viscosity nwere ike ime ka usoro mmepụta dị mfe; Maxcellulose ethers gbanwetụrụ nwere ezigbo ihe mgbochi ọgwụ, na-enye oge nchekwa agba zuru ezu, mgbochi dị mma nke ụcha na ụcha.